त्यहाँ धेरै अवस्थाहरू छन् जहाँ देयता कानून को एक भूमिका खेल्छ। उदाहरणका लागि, सोच्नुहोस्, एक स्थितिमा जसमा एक कर्मचारीले आफ्नो कामको सन्दर्भमा वा प्रदर्शनको क्रममा दुर्घटना भोग्छ। यस्तो अवस्थामा, नियोक्ता कहिलेकाँही कानुनी रूपमा कानूनी रूपमा जिम्मेवार समात्न सकिन्छ पीडित भएको क्षतिको लागि कर्मचारीको प्रति।
एक दायित्व मालिकको आवश्यकता छ?
त्यहाँ धेरै अवस्थाहरू छन् जहाँ देयता कानून को एक भूमिका खेल्छ। उदाहरणका लागि, सोच्नुहोस्, एक स्थितिमा जसमा एक कर्मचारीले आफ्नो कामको सन्दर्भमा वा प्रदर्शनको क्रममा दुर्घटना भोग्छ। यस्तो अवस्थामा, नियोक्ता कहिलेकाँही कानुनी रूपमा कानूनी रूपमा जिम्मेवार समात्न सकिन्छ पीडित भएको क्षतिको लागि कर्मचारीको प्रति। केहि अवस्थाहरूमा, उत्पादकहरूलाई उत्तरदायी मान्न सकिन्छ। यो केस हो जब एक उपभोक्ता क्षति ग्रस्त छ र स्थापित छ कि क्षति उत्पादन मा एक दोष द्वारा भएको थियो। साथै, एक कम्पनी को निर्देशक केहि केसहरु मा व्यक्तिगत वा कम्पनी को सट्टा व्यक्तिगत उत्तरदायी मान्न सकिन्छ।
> उत्पाद दायित्व
> निर्देशकको दायित्व
> गल्ती-आधारित दायित्व
> व्यावसायिक दायित्व
के तपाईं उत्तरदायी हुनुहुन्छ वा तपाईं कसैलाई जिम्मेवार समात्न चाहनुहुन्छ? दायित्व वकिलबाट Law & More तपाईंलाई कानूनी समर्थन प्रदान गर्न खुसी हुनेछ।
विषयहरूको उदाहरण हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं:
Yer रोजगारदाता दायित्व;
; उत्पाद दायित्व;
• निर्देशकको दायित्व;
; कडा दायित्व;
Ult दोष-आधारित दायित्व;
• व्यावसायिक दायित्व
के तपाइँ क्षतिको लागि दावीसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाइँ प्रक्रियामा कानूनी सहायता चाहानुहुन्छ?
यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो कामको प्रदर्शनको बखत वा पनी कुनै दुर्घटनामा परेको छ भने, रोजगारदाता कानूनमा कानुनी रूपले कर्मचारीलाई क्षतिको लागि जिम्मेवार हुन सक्छ। यो किनभने काम काम भइरहेको बेलामा रोजगारदाताको हेरचाहको विशेष दायित्व हुन्छ। ऊ आफ्नो कामको प्रदर्शनको समयमा एक कर्मचारीले भोगेको क्षतिको लागि उत्तरदायी छ, जबसम्म उसले आफ्नो देखभालको दायित्व पूरा गरेको देखाउन सक्दैन। यदि रोजगारदाताले प्रदर्शन गर्न सक्छन् कि उसले दुर्घटना रोक्न सबै उचित उपायहरू गरेको छ भने, उहाँ दोषी हुनुहुन्न। साथै, परिस्थितिहरूमा कि कर्मचारीलाई जानाजानी वा जानाजानी लापरवाह गरिएको छ, रोजगारदातालाई दोष दिन मिल्दैन। हामी सबै तथ्यहरू र परिस्थितिहरूलाई हेर्छौं र तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं यदि तपाईंलाई रोजगारदाताको रूपमा जिम्मेवार ठहराइएको छ वा यदि तपाईंले आफ्नो रोजगारदातालाई चोटपटक लागेको क्षतिको लागि जिम्मेदार ठान्नुहुन्छ भने।
जब तपाइँ एक उत्पादन किन्नु भयो, तपाइँ यसलाई ठोस हुने आशा गर्नुहुन्छ। तपाईले अपेक्षा गर्नुहुन्न कि यसको प्रयोगले तपाईलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। दुर्भाग्यवस, यो अझै हुन सक्छ। तपाईं एक दोषपूर्ण मेशिन, खाना र अन्य उपभोक्ता उत्पादनहरूका कारण हुने क्षतिको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ।
निर्माता कानूनी रूपमा क्षतिको लागि जिम्मेवार छ जब यो प्रमाणित हुन्छ कि क्षति उत्पादनमा एक दोषको कारण भएको थियो। एक उत्पादलाई दोषपूर्ण मानिन्छ यदि यसले सुरक्षा तपाईले यसबाट अपेक्षा गरेको सुरक्षा प्रदान गर्दैन। यदि तपाईं एक दोषपूर्ण उत्पादनको परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त भएको छ भने, हामी तपाईंलाई कानुनी समर्थन प्रस्ताव गर्न खुसी हुनेछौं।
सिद्धान्तमा, कम्पनी लिइएको debtsणको लागि उत्तरदायी छ। यद्यपि कुनै कम्पनीका निर्देशकले केही केसहरूमा कम्पनीको थप वा यसको सट्टा व्यक्तिगत उत्तरदायी मान्न सक्दछ। एक निर्देशक वास्तव मा आफ्नो कर्तव्यहरु को सही प्रदर्शन गर्न बाध्य छ। यदि तपाईं एक कानुनी संस्थाको निर्देशकको रूपमा जिम्मेवार हो भने, नतिजा पर्याप्त हुन सक्छ। Law & More निर्देशकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ जो उत्तरदायित्व आरोपको साथ सामना गरिन्छ वा धम्की दिन्छ। हामी पार्टीहरूलाई मद्दत गर्दछौं जो एक निर्देशकलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन चाहन्छन्।
यस प्रकारको दायित्व गल्ती वा लापरवाहीमा आधारित छ। यदि तपाईंले क्षति भोग्नु भएको छ भने, हामी तपाईंलाई कानुनी रूपले उत्तरदायी यो क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिलाई समात्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं। तपाईले हामीलाई कानुनी सहायताका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले अरुलाई चोट पुर्‍याएको खण्डमा जिम्मेवार छ भने।
जब एक स्वरोजगार पेशेवर, जस्तै एक डाक्टर, एकाउन्टेन्ट वा नोटरी, एक पेशेवर गल्ती गर्दछ, ऊ वा उनी ग्राहक वा बिरामीहरूप्रति कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुन सक्छ। तर कुन केसहरूमा यस्तो व्यावसायिक दुराचार हुन्छ? यो एक जटिल प्रश्न हो। उत्तर केसका सबै तथ्य र परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं स्व-रोजगारदाता हुनुहुन्छ र पेशेवर गल्तीको लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं।